>Garunar Shin – Letter from Nargis
> နာဂစ်ဒေသက လာတဲ့စာ ဂရုဏာရှင် ဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ ဒီတခေါက် နာဂစ်ဒေသက ရွာတွေကို ပြန်ရောက်တော့ အပြောင်းအလဲတွေ တွေ့ရတယ်။ ပထမဦးဆုံး ပုံကတော့ ယခင် ငပုတောမြို့နယ်၊ ယခု လပွတ္တာမြို့နယ်က အောက်ပြွန်ဝရွာက သဘာဝဘေးရန်ကာ အဆောက်အဦကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကျောင်းတွေ အိမ်တွေကို ပန်းလှိုင်အဖွဲ့က ပြည်ပအလှူရှင်များနဲ့ ကြည့်ကြပ်ပြီး ဆောက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်သုံး ဓာတ်အားစနစ်၊ ဘက်ထရီအားသွင်း လျပ်စစ်မီးစနစ်တွေကို သုံးထားလို့ ညဆိုရင် မီးတွေ ထိန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယခင်တုန်းက အဲဒီရွာကလေး ရွာလုံးကျွတ်ပါသွားခဲ့တော့ သံဃာတော်တွေက မြန်မာငွေ ၁၅ သိန်းလောက်နဲ့ မတည်ပြီး အားပေးခဲ့ရတဲ့ ရွာကလေးပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ တဲတန်းရှည်ကြီးတွေ၊ အိမ်တွေအားလုံးကို အသစ်ပြင်ဆောက်လိုက်ကြပြီ...
>solar eclipse in burma
> ယမန်နေ့က ကြတ်သည့်နေ မြန်မာပြည်မှ မြင်ရဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နေကြတ်ခြင်းကို ကြည့်ရှုနေကြသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ကိုရင်ငယ်များ။ယမန်နေ့က ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ပါရှိခဲ့သော နေကြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်း။ No tags for this post.
>25th Jan 2009 – MoeMaKa Sunday Weekly Radio
> မိုးမခ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး – ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး သတင်းတိုထွာ သီချင်းပဒေသာ စစ်အစိုးရ ခြေလှမ်းများ သတိထား – ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း လင်ကွန်း၊ မာတင်လူသာကင်းနဲ့ အိုဘားမား – မောင်ရစ်၊ မိုးမခ ဦးသန့် နှစ် ၁၀၀ မွေးနေ့ – ဦးသက်ထွန်း (အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး) လွတ်လပ်သော ဇာဂနာနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – အပိုင်း ၂ ၁၀ နှစ်မြောက် တွံတေးသိန်းတန် အလွမ်းပြေ အပိုင်း ၂ – မာမာအေး၊ ၀င်းပပသိန်းတန် အမေရိကန်သမ္မတ ကျမ်းကျိန်ပွဲ – SBS ဦးကျော်ထွန်းအောင် ဘုရားမကြိုက်တဲ့ လူမိုက်ကြီး ၅...
> ဦးသန့် ရာပြည့် ကာတွန်း ကလျာမိတေဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ No tags for this post.
> သန့်ရာပြည့် (အပိုင်း – ၂)ဦးအုန်းကျော် ဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ (ဃ) မြန်မာ့သာသနာရေး အာဇာနည် အရှင်သူမြတ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ (တောင်မြို့)အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ကြီး (၁၉ဝဝ-၁၉၇၇) ရဲ့ ‘အနာဂတ် သာသနာရေး’ စာအုပ်ဟာ ၁၉၄၉ ခုနှစ် (လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁ နှစ်အကြာ) မှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ “(လွတ်လပ်ပြီးစ) ဤအချိန်မျိုး၌ ငါတို့သာသနာဝင် အရှင်မြတ်တို့သည် ကိုယ်စီကိုယ်င ဣနြေ္ဒရရနှင့် ထထကြွကြွ ရှိလိုက်ကြမည်ဆိုလျှင် လွတ်လပ်ပြီးနောက် ၁ဝ နှစ်လောက် အကြာဝယ် ကမ္ဘာက လေးစားရသော တိုင်းပြည်ကလေး တပြည် မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု မည်သူ ကန့်ကွက်ရဲအံ့နည်း။ ထိုကဲ့သို့ အကျိုးကို မြော်မြင်ကာ ယခုအချိန်မှာ ဤကျမ်းစာမျိုး ရှိသင့်ပြီဟု ထင်မြင်လာပေသည်” ဟု...
>Nay Choo – Tin Moe, the great guest from haven to earth 03
> ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး – ၃နေခြူးဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ နောက် ဆရာကြီးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာလေးက သူ့ကြောင့် တဖက်သား ထိခိုက် နစ်နာသွားမှာကို မလိုလားတာပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတာထက် လေးစားဖို့ ကောင်းတာပါ။ ( ၅ ) ဆောင်မှာ ”ဘိုးတော်ဟိန်း” ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်တယောက် ရှိတယ်။ ယောင်ထုံးကြီးနဲ့။ ဆန်တွေ စုထားကြ၊ ဆီတွေ စုထားကြ၊ တိုင်းပြည် ပျက်တော့မယ်ဆိုပြီး သူ့တပည့်တွေကို ပြောလို့ စစ်ခုံရုံးက (၅-ည) ပုဒ်မ တပ်ပြီး ထောင် (၁ဝ)နှစ် ချခံထားရသူပါ။ ဘိုးတော်ဟိန်းကို အပြင်မှာ စီးပွားရေးသမား လူချမ်းသာတွေ ကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ အထဲမှာတော့ နေချင်သလိုနေ၊ ဖြစ်သလိုစား၊ ပါးစပ်ကလည်း တောင်တောင်အီအီ...
> ပုံ – ၁ မြန်မာပြည်မှ အသက်အငယ်ဆုံး သီလရှင်ဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉သရုပ်ဆောင် လူမင်းက ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူကို ယခုလ ၁ ရက်နေ့၌ ကျရောက်သော ရက် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သီလရှင် ၀တ်ပေးခဲ့ကြောင်း အလင်းတန်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ- အလင်းတန်းဂျာနယ်) ပုံ ၁ – အသက်အငယ်ဆုံး သီလရှင် မစန္ဒာဓိကာ၊ အမည်ရင်း မဧရာဝတီလူမင်း။ပုံ ၂ – ရွှေတိဂုံစေတီတွင် တွေ့ရသော နာမည်ကျော် ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက နှင့် သရုပ်ဆောင်လူမင်းပုံ ၃ – ရွှေတိဂုံစေတီ အထက်ပစ္စယံတွင် ရွှေပြား တပ်ဆင် လှူဒါန်းနေသော ရုပ်ရှင်မင်းသား။ပုံ – ၂ ပုံ –...
>Mar Mar Aye – 261
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၁)‘ရွှေပြည်စိုး’ နဲ့ ‘ဟေ၀န်နန်း’ မာမာအေးဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ရှေ့တပတ်မှာတုန်းက မျိုးချစ်စာဆိုတွေထဲမှာ တဦး အပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ ပြဇာတ်ဝိဇ္ဇာ ဒါရိုက်တာကြီး ဒဂုန်ဆရာတင် ရေးခဲ့တဲ့ ‘ဓနရှင်’ နဲ့ ‘အာဏာရှင်’ သီချင်း နှစ်ပုဒ်ဟာ အသံတူ စာကွဲ သီချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောရင်း မသိမသာ ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုး ထိုးဖောက် နယ်ချဲ့တာမျိုး ခံစားမိနေလို့ သတိပေးတာမျိုးလည်း ပြောခဲ့မိပါတယ်ရှင်။ မာအေး ပြောပြလာခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ဂီတစာဆိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့တဲ့ ‘အာယားမ’...
>U Thant turns 100 at SF Bay Area
> ဦးသန့် နှစ် ၁၀၀ မွေးနေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာမှာ ပြုလုပ် မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ တတိယမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ကွယ် လွန်သူ ဦးသန့်ရဲ့ နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ နေရာက ဖရီးမောင့်မြို့ မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ ဓမ္မ ရိပ်သာမှာပါ။ ဒီပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရာရှိ လူငယ်များက ဦးဆောင် ကမကထပြုလုပ်ကာ ကျင်းပကြတာပါ။ ဦးသန့်အကြောင်းကို လူငယ်တွေပိုမိုသိရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဉာဏိက၊ ဆရာဦးလှမင်း၊ ဆရာကိုထိန်လင်းနဲ့ ဆရာမင်းဇင်တို့က ဟောပြောကြပါတယ်။ Tags: ဆန်ဖရန်
>U Thant by Nyan Oo Maung
> အနှစ်တရာ မမေ့သာ ဉာဏ်ဦးမောင် ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်ကြီး ရဲ့ တတိယမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်တဲ့ ကွယ်လွန်သူ ဦးသန့်ရဲ့ နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ နေရာက ဖရီးမောင့်မြို့ မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ ဓမ္မ ရိပ်သာမှာပါ။ ဒီပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရာရှိ လူငယ်များက ဦးဆောင် ကမကထပြုလုပ်ကာ ကျင်းပကြတာပါ။ ဦးသန့်အကြောင်းကို လူငယ်တွေ ပိုမို သိရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဉာဏိက၊ ဆရာဦးလှမင်း၊ ဆရာကိုထိန်လင်းနဲ့ ဆရာမင်းဇင်တို့က ဟောပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တဦး ဖြစ်ပေမယ့် ဦးသန့်အကြောင်းကို လူငယ်များ သိပ်ပြီး မသိကြပါဘူး။ ဒါကလည်း...
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၇)မှတ်စုမှတ်တမ်းဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ထိုင်းဘုရင် နဲ့ သမ္မတမန်းဝင်းမောင် မြင်းမွေးမြူရေးနဲ့ သားစပ်ရေးစခန်းများ သုံးနေရာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ တနေရာ၊ မန္တလေးမှာ တနေရာနဲ့ တောင်ကြီးမှာ တနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်စခန်းကို ဦးဘလှိုင်၊ မန္တလေး စခန်းကို ဦးကင်းနဲ့ တောင်ကြီးစခန်းကို ဦးဘပေါတို့က အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်စခန်းဟာ သမ္မတအိမ်တော်ဝင်း ရှမ်းလမ်းနဲ့ အလုံလမ်းထောင့်ဘက်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြင်းမွေးမြူရေးစခန်း အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိဦး ဘလှိုင်ဟာ စခန်းနားမှာ ရှိတဲ့ သစ်သားအိမ်ကြီးမှာ နေပါတယ်။ တခါတလေ ပါပါ ဦးဘလှိုင်ဆီသွားပြီး အိပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သမ္မတအိမ်တော်ဝင်းမှာ ရှိတဲ့ သစ်သားအိမ်မှာ ပါပါ အိပ်ခဲ့သော်လည်း တနေ့ကျသမ္မအိမ်တော်ကြီးထဲမှာ ပါပါအိပ်ရမယ်လို့ စိတ်မကူးခဲ့ပါ။...
>Nay Choo – Tin Moe, the great guest from haven to earth 01
> ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး – ၂ နေခြူး ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးနဲ့အတူ (၅)ဆောင်မှာနေရင်း ၁၉၉၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၉ ရက်မှာ ဆရာကြီး အသက်(၆ဝ) ပြည့်တယ်။ (၆ဝ) ပြည့် အမှတ်တရအနေနဲ့ သူ ကဗျာတပုဒ်ဖွဲ့တယ်။ ကဗျာက တိုတိုလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကဗျာလေးဟာ သူ အကျဉ်းခံကာလမှာ ပထမဆုံး ဖွဲ့တဲ့ ကဗျာလေး လို့ ပြောပါတယ်။ ”ငါကွ၊ ငါဟဘာကမှ ရှာမရမာန ပြာကျစာနာမျှသည်လငပုတ်ဖမ်း လွတ်ခဲ့ပြီ…” တဲ့။ ဒါပါပဲ။ ဒီကဗျာလေးကို ကျနော်နဲ့အတူ တခြား ရဲဘော်တွေကိုလည်း ရွတ်ပြတယ်။ အပြင်ထုတ်ထားချင်တယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ ခက်တာက အဲဒီကာလ ထောင်တွင်း...
> သီရိလင်္ကာမှ နာမည်ကျော် သတင်းစာအယ်ဒီတာ Lasantha Wickramatunga သည် မကြာသေးမီက လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်. အုတ်ဂူထဲက လာတဲ့စာကေ ဘာသာပြန်သည်ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေး နေ့က သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံရဲ့ The Sunday Leader သတင်းစာ အယ်ဒီတာ တယောက်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ် Lasantha Wickramatunga ဟာ အလုပ်ကနေ အိမ်အပြန်ခရီးမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီး သေနတ်သမား ၂ယောက်ရဲ့ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ The Sunday Leader သတင်းစာရဲ့ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ရေးသားချက်တွေဟာ လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ သူ့ရဲ့ တမီးလ် ခွဲထွက်ရေးသမားများအပေါ် ဆင်နွှဲနေတဲ့ စစ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်...
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၂)‘အိုးဝေကျေးဇူး’အောင်ဝေးဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ အိုးဝေခွပ်ဒေါင်း – ခွပ်ဒေါင်းအိုးဝေလို့ တင်စားကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမျိုးသားရေးတိုက်ပွဲ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကျေးဇူးကို ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်က အခုလို ကဗျာတပုဒ်နဲ့ ဂုဏ်ပြု ဖော်ကျူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ‘ဒေါင်းပျိုထိုးဆွပ်၊ ဘယ်ညာခွပ်၍၊ လွပ်လပ်ရလေ၊ တို့တတွေသည်၊ အိုးဝေကျေးဇူးပါတကား’ တဲ့။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းဟာ ကျောင်းသားတိုက်ပွဲသမိုင်းနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ လွတ်လပ်ပြီးခေတ် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာလည်း ကျောင်းသားတိုက်ပွဲ သမိုင်းနဲ့ ခွဲခြားလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစောဆုံး ကျောင်းသားတိုက်ပွဲလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ ၁၉၂ဝ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပထမ ကျောင်းသားသပိတ်ကနေ စပြီး ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရင်...
> အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များအား ရဲကစောင့်ကြည့်နေ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း ယုဒသန် ခန်းမ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ (ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသည့် ရောဂါ) ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ရန်ပုံငွေပွဲ အပြီး အဆိုပါ ဝေဒနာရှင်များ အနက်မှ ၂၆ ဦးအား အာဏာပိုင်များက ၄င်းတို့ တည်းခိုနေသော မြောက်ဥက္ကလာပ ရေလယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးသို့ အတင်းအကြပ် ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေသည်ဟုသိရှိရသည်။ ထိုပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ရေလယ်ကျောင်းမှာ တည်းခိုလျက်ရှိသော ဝေဒနာရှင် စုစုပေါင်း ၃၅ ဦး ထဲမှ ၂၆ ဦးအား ယခုလ...
> ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး နေခြူး ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ အမှာစာ အဖေ ကဗျာဆရာဦးတင်မိုး ဆုံးပြီး လအနည်းကြာတဲ့ တနေ့မှာ ကိုယ့်လက်ထဲကို စာအုပ်လေး တအုပ် ရောက်လာပါတယ်။ အဖေ့ သားအရင်းတယောက်လို ချစ်ခင်တဲ့ ကျောင်းသားလေး တယောက်ရဲ့ အဖေ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာမူပါ။ မလွတ်လပ်တဲ့ နေရာ၊ အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ နှလုံးသွေးနဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ စာမူလေးပါ။ အဖေ့အကြောင်းကို လူတွေ သူတို့မြင်တဲ့ထောင့်ကနေ အမျိုးမျိုးရေးကြတာ ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားအတွက် အဖေ မတရားအဖမ်းဆီးခံရစဉ် အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကိုတော့ မသိခဲ့ရပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးလွန်းတဲ့ အဖေ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုများ နေထိုင်ခဲ့သလဲ ကိုယ်တွေးကြည့်မိဖူးတယ်။ အခု ဖော်ပြမဲ့...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၃) အမျိုးသားစာဆို ကဗျာဆရာတင်မိုးထိန်လင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်အကြောင်း ရေးသားတုန်းက အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန်ဆင်ဟာ ဦးသန့်ရဲ့ ၆၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ဦးသန့်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲက ကောက်နုတ်ပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူကွယ်လွန်ပြီးမှ သူ့မွေးနေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ စာဆိုကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းတော့ ဦးသန့် သိမသွားခဲ့ပါဘူး။ သူကတော့ ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတင်မိုးက ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဆိုတော့ ဦးသန့်ရဲ့ ရာပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ အခုနှစ်မှာ ဆရာတင်မိုး ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အနှံ့အပြားကို ပုဆိုးနဲ့ ပင်နီတိုက်ပုံ ဝတ်ဆင်ရင်း သွားလာခဲ့တဲ့ ဆရာဟာ မြန်မာပြည်ကို...
> ကမ္ဘာကြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေ့ ဥတ္တရမွန်းဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်၊ ပစိဖိတ် စံတော်ချိန် နံနက် ၉နာရီ ၅မိနစ်မှာ အသက် ၄၇ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ အိုဘားမားဟာ အေဘရာဟင်လင်ကွန်း သုံးဖူးတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ပေါ်မှာ လက်တင်ပြီး ကျမ်းကျိန်သစ္စာဆိုကာ ပထမဦးဆုံးသော လူမည်း အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ၀ါရှင်တန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သမ္မတ ကျမ်းကျိန်ပွဲကို လူပေါင်း ၁ သန်းကျော်လောက် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လူအုပ်ကြီးဟာ ၂မိုင် နီးပါးလောက် ရှည်လျားပါတယ်။ သမ္မတအိုဘာမားရဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ရှိတဲ့ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းကို တကမ္ဘာလုံးက သန်းပေါင်း များစွာသော လူများ နားထောင် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ အင်တာနက်မှ ကြည့်ရှုသူလည်း...
>NLD-Youth marked U Thant 100 Year Birthday
> ဦးသန့် ရာပြည့်မွေးနေ့ အင်န်အယ်ဒီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်များ စာဖတ်ဝိုင်း ကျင်းပခဲ့ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဦးသန့် ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အင်အယ်ဒီလူငယ်များ က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ပါတီရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ နေ့လယ်က စာဖတ်ဝိုင်း ကျင်းပခဲ့သည်။ ၄င်း စာဖတ်ဝိုင်းတွင် ဆရာဦးဝင်းတင်၊ ဆရာဖျာပုံနီလုံဦး တို့က ဦးဆောင်ပြီး လူငယ်များက စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆရာဦးဝင်းတင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် အင်န်အယ်ဒီ လူငယ်များသည် အင်အားသစ်များ ရရှိကာ စနစ်တကျ လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်လာကြကြောင်း၊ မြန်မာပြည်၏ လူထု ထောက်ခံမှု အပြည့်အ၀ ရရှိထားသော အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီး...
> သန့်ရာပြည့် (အပိုင်း – ၁)ဦးအုန်းကျော်ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဟာ ၁၉ဝ၉ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက် သောကြာနေ့ဖွားမို့ အခုအချိန်အထိ အသက်ထင်ရှား ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အသက် ၁ဝဝ ပြည့်ပါပြီ။ ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေလည်း ကမ္ဘာအနှံ့ရောက် မြန်မာတွေက ကျင်းပကြတာလည်း ကြားနေရပါပြီ။ တကယ်တော့ ဦးသန့်ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရေးသမိုင်းစဉ် တခုလုံးမှာ အမြဲတမ်းတောက်ပနေတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် မှတ်တိုင်စိုက်ထူခဲ့သူပါ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ဇာတ်ခုံကြီးရဲ့ အခက်အခဲဆုံး ပြဿနာတွေ၊ အရှုပ်ထွေးဆုံး ပုစ္ဆာတွေနဲ့ နပန်းလုံးခဲ့ရတဲ့ (၁၉၆ဝ – ၇ဝ တဝိုက်က) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးဟာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ သိက္ခာတက်ခဲ့ရတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားမှာ စစ်မီးပွားတွေဟာ...
>Moe Cho Thin – The Train Travellers
> မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားခြင်းမိုးချိုသင်းဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းက ဒီနေ့ ဒီအချိန်ပါပဲ။ ပြက္ခဒိန်ထဲမှာ ဒီနေ့ ဒီရက်ကို ထုတ်ပစ်လို့ ရရင် ထုတ်ထားလိုက်ချင်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အဖေ ရုတ်တရက် ခွဲခွာသွားတဲ့နေ့။ မနက်စောစော ရုံးသွားခါနီး နှုတ်ဆက်တော့ အဖေ့ကို နောက်ဆုံး အသက်ရှင်ရက် မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။ ထုံးစံလို စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်ဖွာလို့။ စားပွဲပေါ်မှာ ဆေးလိပ်ပြာခွက်၊ ကော်ဖီ၊ မုန့်၊ မီးခြစ်။ အိမ်ကအထွက် တံခါးဝကို ကျောပေးထိုင်နေတဲ့ အဖေ့ ကျောပြင်ကြီးကို နောက်ဆုံး တွေ့ရခြင်းပါပဲ။ သွားတော့မယ် အဖေ၊ အေး … အေး၊ ဖြေးဖြေးသွား သမီး။ တကယ်က ဘယ်သူက အပြီး သွားမှာလဲ။...
>KThwe – Remembering Tin Moe,2years
> ဆရာကြီးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကေသွယ်ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဆရာကြီးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အတွက်- ဟိုးအဝေး ဖုန်ထူထူမြို့လေးကနေပြီး..ကမ္ဘာပြားပြား ဒိုးယိုပေါက်က တဆင့် .. စီးဆင်းရောက်လာတဲ့.. အမတယောက်ရဲ့ ခံစားချက် စာလုံး ကလေးတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်က ခရီးရှည်ရွက် လွှင့်သွားခဲ့တဲ့ ကဗျာ ကြယ်ကြီး တလုံးကို လွမ်းဆွတ် တသစိတ်နဲ့ မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိ။ ဟိုး … အရှေ့ဖက် မိုးကောင်းကင်မှာ အရောင်ဖြာ တောက်ပနေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ကဗျာကြယ်ကြီး … ကြည့်စမ်း … သူ့ထံမှ လှိုက်လှဲနွေးထွေးတဲ့ အပြုံးဓာတ်တွေဟာ ကူးစက်ခံစား ကျမကို လွှမ်းခြုံသွားပေါ့။ ဒါဆို သူ...
> ကဗျာချိုး ဆေးလိပ်ချိုး ဆရာမိုး ကိုကိုအောင် (ဆန်ဖရန်စစ္စကို) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဆေးလိပ် သောက်တာ မကျန်းမာ ရွံလည်း ရွံစရာ ငွေကုန် သံပြာ ချောင်းတွေဆိုး သောက်ဟဲ့ သေခြင်းဆိုး တင်မိုး … တင်မိုး … ဤကား ဆရာတင်မိုးရေးခဲ့သည့် ကဗျာ နောင်လာနောင်သား မှတ်စေဖို့ စေတနာထားပြီး သူ မှာသဗျို့ သူအဖို့တော့ ဆေးလိပ်စွဲ မိုက်လက်စနဲ့ မိုက်မှာပဲ တဲ့။ ပြောမယုံ ကြုံမှသိ မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့ တဲ့ သေတဲ့အထိ ဆေးလိပ်ညှိ သောက်ဘိ သောက်၏။ ဆရာတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း၂ နှစ်မြောက် အလွမ်းပြေ ကိုကိုအောင်(ဆန်ဖရန်စစ္စကို) ဝ၁-၂၁-၂ဝဝ၉ Tags: ဆန်ဖရန်
>Maung Swan Yi – Tin Moe and His Place in Burmese Literature
> မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာ တင်မိုးရဲ့ ကဏ္ဍကို သုံးသပ်ကြရင်(တင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်)မောင်စွမ်းရည်ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ကဗျာဆရာ တင်မိုး ကွယ်လွန်တာ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ မှာ ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ တင်မိုးဟာ “လူသာ သေ၊ နာမည် မသေဘူး” လို့ လူတိုင်းက မှတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ ကဗျာဆရာဖြစ်ပါတယ်။ တင်မိုးဟာ တသက်လုံး ကဗျာရေးသွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်မိုးဟာ ကဗျာကို ထုံ့ပိုင်း ထုံ့ပိုင်း ကြိုးကြား ရံခါ ရေးသူ မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လောက်များ ရေးသလဲဆိုရင် ကွယ်လွန်ခါနီး အချိန်အထိ နေ့စဉ်လို ရေးသွားခဲ့ပါတယ်။ မကွယ်လွန်မီ တနေ့အထိ ရေးသွားခဲ့လေရဲ့။ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကာလ ၁၉၈၈ က ၂၀၀၇...
> ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများ ဆွမ်းကပ်ကြမည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ က အမေရိကန်ပြည်၊ အယ်လ်အေမြို့တွင် ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျင် ၂ နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး၏ မိသားစုများနှင့် ရပ်နီး ရပ်ဝေးက စာပေမိတ်ဆွေများ၊ စာပေချစ်သူ ပရိသတ်များက ယခု ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေး အလှူများ အသီးသီး ပြုလုပ်ကြမည်ဟု သိရသည်။ ဆရာ၏ ကျန်ရစ်သူ သမီးများနှင့် မိသားစုတို့က ၎င်းတို့ရောက်ရှိရာ ဒေသများတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများကို ဖိတ်ကြားပြီး သင်္ကန်းကပ်၊ ဆွမ်းကပ်ကြမည်...
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း(၆)မှတ်စုမှတ်တမ်းဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက် ထိုင်းဘုရင် နှင့် သမ္မတ မန်းဝင်းမောင် ပါပါစီးနင်းလိုက်ပါတဲ့ မီးရထားဟာ မြစ်ကြီးနားမှ နံနက်ပိုင်းမှာ ထွက်ပါတယ်။ လူစီးတွဲတွေမှာ ဂျပန်စစ်သားတွေ ရှိလို့ ပါပါ ကုန်တွဲမှာပဲ စီးရပါတယ်။ နဘားဘူတာကို နေ့လယ်လောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ နဘားဘူတာဟာ ကသာသွားတဲ့ လမ်းခွဲ ဘူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ ရထားဆိုက်တဲ့အချိန် အင်ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်း ရောင်းပါတယ်။ ကျပ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ ၀က်အူချောင်းကြော် အကြီးစားလည်း ရောင်းပါတယ်။ အလွန်မှ စားကောင်းပါတယ်။ နဘားဘူတာမှာ စားစရာ ဘာများ ရှိသလဲ ဆိုပြီး ဆင်းကြည့်ရာ မီးရထား ရုတ်တရက် ပြန်ထွက်လို့ အပြေးအလွှား ပြန်လိုက်စီးရပါတယ်။ ရွှေဘိုကို ညမိုးချုပ်မှ...
>Mar Mar Aye – Remembering Tin Moe,2year anniversary
> ၂ နှစ်ပြည့် ကဗျာမိုး အမှတ်တရ မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဆရာတင်မိုး ဒေါင်းရိုး ဖြူစင် ဂန္တ၀င်။ ပွဲဝင် စင်တက် ၀ိဉာဉ်လက်တို့ အကို့နေရာ၊ လပ်ရှာတာ သိ ‘၂’ နှစ် ရှိပြီ။ ကသီလင်တ၊ နှိုင်းမရသော ဒေါသ လောင်မီး၊ ခါးသီးစရာ မြန်မာခံစား၊ ဒုက္ခများကို ကြားရလေလေ၊ လူစုံလေတိုင်း နဘေကာရံ၊ နှံထက် နှံတတ် ကလောင်မြတ်သာ၊ ရှိစမ်းပါလား အုတ်ကြားမြက်တွေ၊ ညက်ညက်ကြေအောင် တတောင်နှင့် ထောင်း၊ ခြေစောင်းနှင့် ခတ် မြိုင်ရပ်ကို နှင်၊ ကဗျာဆင်လိမ့် ပြောချိမ့်ချိမ့်။ တသိမ့်သိမ့်ဝေး၊ နုအေးညင်သာ တွေးမိလာသော်၊ အတော်ပါဘဲ ဆင်းရဲကိုယ်စိတ်၊ နိဗ္ဗာန် ဆိတ်မည့် သပိတ်မှောက်ကံ၊...
>Thein Pe Myint’s Hmine
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၂)ဆရာ သိန်းဖေမြင့်၏ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိထိန်လင်းဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း စာပေနဲ့အနုပညာသမားတွေဟာ ခေတ်အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရပ်တည် ရှင်သန်ကြရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်တဲ့အခါ မြန်မာ ရုပ်ရှင်အနုပညာသည်တွေက ရုပ်ရှင်နဲ့ ရပ်တည်လို့မရတော့ ပြဇာတ်တွေ ကပြရင်း ဝမ်းကျောင်းရတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ စာပေပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း စာပေလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း ဇောက်ချလုပ်ကိုင်သူ စာရေးဆရာတွေ ရှိသလို ဝန်ထမ်းအလုပ်၊ လက်လုပ်လက်စား စသဖြင့် လုပ်ငန်းမျိုးစုံကို တဖက်က လုပ်ရင်း တဖက်မှာ စာရေးဆရာ အဖြစ် ရပ်တည်နေကြသူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း စာပေတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားက စာရေးတာ၊ စာရေးဆရာက နိုင်ငံရေးလုပ်တာတွေ ရှိပေမယ့် ၂...
>Ni Lon Oo – Remembering Tin Moe
> တိုက်ပွဲပျော် ကဗျာဆရာ ဖျာပုံ နီလုံဦး ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲ မျက်နှာစာရဲ့ ကဗျာတပ်ဦးမှာ သင်ဟာ ကြီးမြတ်တဲ့ မဟာကဗျာဆရာ သူရဲကောင်းတယောက်ပါပဲ။ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲခြေလှမ်းသစ် လှမ်းရာမှာလည်း ကဗျာတပ်မှူးကြီး အနေနဲ့ သင်ဟာ ရဲရင့်တည်ကြည်တဲ့ တကယ်သံမဏိ လူသားအမွန်ပါ …။ သင် ကြွေခဲ့ပေမယ့် သင့်ကဗျာ သင့်စာတွေဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့ … ကမ္ဘာအနှံ့ ရေမြေတောတောင်အနှံ့ … မိုးကောင်းကင်အနှံ့ စီးဖြန့်မကုန် … မာန်ဟုန်မပျက် ၀င်းလက် ကြွရွ … ရွှန်းပတောက်ကြွား တို့ အသည်းနှလုံးကြားမှာ မားမားမတ်မတ် … ထာဝရ ရပ်တည်နေမည် ဟု တို့ အားလုံး ယုံကြည်လျက်ပါ။...
>Boat people in Thailand 02
> ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် ရိုဟင်ဂျာများသတင်း နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်ဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ထိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသို့ လှေဖြင့် ဆိုက်ရောက်လာကြသော မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ။ထိုင်းကြည်းတပ် ဗိုလ်မှူးကြီးက Koh Sai Baed ကျွန်းသို့ရောက်ရှိလာသော ၎င်းတို့အား သွားရောက် စစ်ဆေးပုံများကို မကြာသေးမီက Reuters သတင်းဌာက ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသူများမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့အား ပင်လယ်တွင်းသို့ ပြန်လည်စေလွတ်ခဲ့ပြီးနောက် ရာနှင့်ချီ၍ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ဟူသော သတင်းမှာ နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းသတင်းတပုဒ် ဖြစ်နေသည်။ (photos: Reuters) No tags for this post.
Page 825 of 890«1...823824825826827...890»
>Maung Soe Chain - Berkeley Poem
>99sanay and book launch event
စိန်ဝင်း ● သနားစရာ သတင်းစာဆရာ https://t.co/D8hdyUc4C6 https://t.co/9dbgA2SV4P about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite